Isimada oo Soo Xulista Wakiillada kala shaqeyn doona Guddiga Ansixinta Wakiillada Puntland – Kalfadhi
Isimada Puntland ayaa hadda saameyn xoog leh ku yeelan doonta hanaanka soo xulista Xubnaha Golaha Wakiillada Puntland, kadib markii musharraxiinta u taagan sanadka xiga Xilka Madaxweynaha Puntland ay ka cawdeen Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Golaha Wakiillada Maamulkaas, oo uu soo magacaabay Madaxweynaha Puntland ee xilka ka degi doona hal bil kadib, Mudane Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas).
Guddiga ay Musharraxiinta u tartameysa Xilka Madaxweynaha Puntland qoonsadeen waa kan ku dhawaaqi doona inta lagu guda jiro bishan tirada Xubnaha Golaha Wakiillada ee sanadka xiga soo dooran doonta Madaxweynaha Puntland ee 2019-2023 hogaamin doona Puntland. Musharraxiintu waxay ka shakisan yihiin inuu Madaxweyne Gaas faragalin xoog leh ku haayo Guddigaas, si uu u soo saaro Wakiillada uu doonayo, si ay markale isaga u soo doortaan.
Hase ahaatee, waxaa Guddiga ay ahayd inuu shaqadiisa u madax-banaanaado balse ay Isamadu ka garab shaqeyn doonaan uu sheegay in waxa lagu haystaa ay tahay uun tuhun. “Waxaa iska dhici kara waxyaabo yaryar, oo marka shaqo la hayo wax baa dadka loo kala sheegaa, wax kalana ma jirinee, dee in leys caluul xaarto oo wax jira leyska qanciyo uun bey ahayd” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Golaha Wakiillada Puntland, Caaqil Ismaaciil Cismaan Barre, oo fasirayey sida ay Isimada isula shaqeyn doonaan, kadib kulan shalay ka dhacay Garoowe.
Isagoo ka hadlayey sababaha keenay iney musharraxiintu ku kalsoonaan waayaan soo xulistooda Golaha Wakiilkada ayuu Caaqilku sheegay in muaharraxa saluugsani uu yahay mid dan u gaar ah ka waayey Guddiga. “Wararkaasi wey iska dhici karaan. Dee, shaqadaan hayno ayaa keeneysa marka uu qofku masaalixdiisa waayo ama siyaabo kale wax ugu muuqdaan inuu si kale wax u turjumo” ayuu Caaqil Ismaaciil ku yiri suxufiyiinta Puntland.
Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Golaha Wakiillada Puntland waxaa durbadiiba uu Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Gaas, magacaabay guddi kale oo ay isku magac iyo isku shaqo yihiin ka daba magacaabay Kuxigeenkiisa Cabdixakiin Camey. Taas ayaana muujisay in Guddiga ay musharraxiintu dhaliilayaan ay isku khilaafsan yihiin xitaa Madaxda Puntland. Camey, oo wax laga weydiiyey ayaa yiri “inagama tala-gelin aniga iyo Guddoonka Baarlamaanka guddiga uu magacaabay”.
Kulanka 31-aad ee Golaha Shacabka oo qabsoomi la’ muddo ku dhaw hal bil